“ကပ်ဖား” (လူလိမ်၊လူယုတ်) သတင်းနောက်ဆတ်တွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » “ကပ်ဖား” (လူလိမ်၊လူယုတ်) သတင်းနောက်ဆတ်တွဲ
“ကပ်ဖား” (လူလိမ်၊လူယုတ်) သတင်းနောက်ဆတ်တွဲ
Posted by Oo on Jan 2, 2011 in News | 13 comments
၁။ ဂျပန်ခေတ်မှ စကားပြန်အလိုတော်ရိဝင်စားသူ
၂။ မြို့သံတွဲရှိ အာဏာပိုင်များကို ခါးပိုက်ထဲထည့်ထားသူ
၃။ ညီအကိုဝမ်းကွဲ တော်စပ်သည်ဟု ပြောသော ထောက်လှမ်းရေးခေတ်မှ ဗိုလ်မှုးမိုးဇတ် နှင့်ပူးပေါင်း၍ ၁လုံး။၂လုံး။ ၃လုံး ဒိုင်လုပ်ခဲ့သူ
၄။ မှတ်ပုံတင်မရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကို ရဲအောင်လံကားဖြင့်အခေါက်ပေါင်းများစွာ ရန်ကုန်သို့ပို့ စီးပွားရှာခဲ့သူ
၅။ ဆိုင်ကယ် TAXI ၁စီးလျှင် ၁၅သိန်းမဟုတ်တော့ဘဲ လိုင်းဝင်ကြေး ၁စီးလျှင် ၂၅သိန်း တောင်းသူ
၆။ ထွန်းသိန်းကျော်၏ တိုက်အိမ်ကြီးတွင် သိန်း ၁၀ဝ ခန့်ကြေးကြီး ဖဲဝိုင်းနေ့စဉ်လုပ်၍ စီးပွားရှာသူ
<အမျိုုးသမီး ဖဲကစားသူအတွက် နိုင်ငံခြားဝိုင်မျိုးစုံ/ အမျိုးသားများအတွက် BLve/ Black/ Red စီးကရက်မျိုးစုံ အသင့်ထားရှိ>
၇။ ဖဲဝိုင်းထောင်၊ ကိုယ်တိုင်ကစား၊ အကောက်ကောက်ခံစားသည့်ကိစ္စရပ် များအတွက် တနေ့ကပြောင်း ရွှေ့သွားသည့် ရဲမြို့နယ်မှူး နှင့်ညီအကိုဖွဲ့ကာ၊ ရရှိသောဝင်ငွေများကို ခွဲဝေယူခြင်းဖြင့် အကာကွယ်ကောင်း ယူထားသူ
၈။ သူဆောက်လုပ်သည့် တိုက်အိမ်ကြီးမှာ သိန်း ၁၀၀ဝ ခန့်အကုန်ခံပြီးဆောက်လုပ်ထားပြီး အခွန်ဦးစီးဌာနသို့ အခွန်မဆောင်ပဲ လာတ်ငွေထိုး၍ အခွန်ရှောင်သူ
၉။ ယခင်ကလည်း ပြေးဆွဲနေသော လိုင်စင်မဲ့ကုန်ကား များအတွက် ပို့ဆတ်ဦးစီးမှ ဒဏ်ငွေရိုက်သဖြင့် အထက်အာဏာပိုင်များကို ကပ်ဖားယပ်ဖားလုပ် တိုင်စာတင်၍ ၎င်းဦးစီးကို နေရာပြောင်းရွှေ့ စေခိုင်းနိုင်သည် အထိအာဏာရှိသူ
၁၀။ ယခင် မ.ထ.သ ရပုံငွေ ၃၅သိန်းအလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့ပြီး ယခု 30.12.2010 နေ့ည စစ်တွေအဖွဲ့နှင့် ဂေါတ် သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ အာဏာပိုင် လူကြီးများအားလုံး ပင့်ဖိတ် ပါတီပွဲလုပ် သောက်စားပျော်ပါး ကယ်ဖား ယပ်ဖား လုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ရံပုံငွေ ထဲမှ ၂၅သိန်း နီးပါး မ.ထ.သ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး ကန့်ကွက်သည့်ကြားက မိမိသဘောဖြင့် ထပ်မံအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ပြန်သူ
၁၁။ နာရေးရံပုံငွေ မ.ထ.သ ရံပုံငွေ များကိုဂေါတ်ရိုက်ရန် အကြောင်းပြ၍ မိမိသဘောဖြင့်ထုတ်ယူအသုံးပြုလျက် မြို့ပေါ်မှ အာဏာပိုင်များ/ အရာရှိကြီးများအားလုံးကို ပါတီပွဲများ ပျော်ပွဲ အရက်မျိုးစုံ ဖြင့်ကျင်းပပေးလျှက် အား လုံး ကိုခါးပိုက်ထဲ ထည့်ရန်အမြဲ ကြိုးပမ်းနေသူ
၁၂။ အဆိုးဆုံးနောက်ပိတ်ဆုံးပြောရင်တော့ မည်သို့မည်ပုံသိမ်းသွင်းခဲ့သည်မသိပါ ကပ်ဖားကြီး ုလုပ်ပုံကာ တော့……………. ခရိုင်ကြံ့ဖွတ်လူကြီးအဖြစ်အသွင်ပြောင်း လျက်ဒေသခံများကို ဒုက္ခဝေဒနာများစွာတို့ ကို ပေးလာတော့မည်သူဖြစ်ချေသည်တကား ၏
ရဲကိုလိုင်းကြေးပေးနေသော ကြေးပြီးဖဲဝိုင်းလောင်းကစားခြင်းကို စစ်ဆေးသင့်ပါကြောင်း
ရဲအောင်လံကားများကို နိုင်ငံခြားသားသယ်ယူမှုအတွက် စစ်ဆေးသင့်ပါကြောင်း
တိုက်အိမ်ကြီးဆောက်လာဘ်ပေး၍ အခွန်ရှောင်မှုကို စစ်ဆေးသင့်ပါကြောင်း
ကပ်ဖားလုပ်ပြီးကျွေးမွေးသော အရက်သေစာများကို မြိုဆို့၍သူခိုင်းသလိုလိုက်လုပ် နေရရှာသည့် အကျင့်ပျက်အာဏာပိုင် များကိုအရေးယူသင့်ပါကြောင်း
ယနေ့ 1.1.2011 နေ့တွင် မ.ထ.သ ၏နောက်ဆုံးလက်ကျန်ငွေ အားလုံးကိုထုတ်ယူပြီး စိတ်တူကိုယ်တူ အပေါင်းအပါတသိုက် ဂေါတ်ရိုက်ရန် စစ်တွေမြို့သို့ ထွက်ခွာပြီး ဂေါတ်ရိုက်ရန်ရောက်ရှိ လာကြတော့မည့် ပြည်နယ်မှအရာရှိ မင်းအာဏာပိုင်များနှင့်တကွ ကြံ့ဖွတ်ပါတီဌာနချူပ်မှ လူကြီးများကို ကပ်ဖားယပ်ဖား ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်လျှက် ၁ချက်ခုတ်၂ချက်ပြက် အစွမ်းကုန်ဖားတော့မည်ခင်ဗျား………………..
သို့ပါ၍ ကြောင်ချီ ကြည့်ရှောင်ကြပါလော့…………..
Cycle TAXI GP
လုပ်လိုက်ကြလေ အားပေးလိုက်ကြတာပေါ့ ဒီလိုလူတွေကခေတ်တိုင်း အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေတတ်တယ် သူ့ကိုယ်သူအဟုတ်ကြီးထင်နေကြတာ ဂျပန်ခေတ်က စကားပြန်လိုကောင်တွေပေါ့
ကို့ အသွေး ကို ကိုယ်ပြန်စားတာ ရင်အနာဆုံးပဲဗျ။
နောက်ပိုင်း သတင်းတွေ ကတော့ ရရချင်း တင်ပေးပါ့မယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ အဲ့ဖက်နဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်နေသေးတယ်။
မ.ထ.သ ပြုတ်ရင်…ပါတီဝိတ်သုံးပြီးတိုင်တဲ့သူတွေ ရှာတွေ့ရင် ဖမ်းချုပ်မယ်…N.L.D ကလူ လို့စွတ်စွဲမယ်..
ဟမရေး နာတော့ တေပြီ။ ဂျပန်ခေတ်လိုပါပဲလား ကွယ်တို့။ ကပ်ဖားရေး အမျှ အမျှ အဲလေ ယောင်ကုန်ပြီ။
ဒီလိုကောင်မျိုးကိုရှင်းပစ်လိုက်လေ… ဒီကရဲတွေညံ့ပါတယ်.. ပိပိရိရိ လုပ်ရင် ဘယ်သူမှ မဖော်နိုင်ဘူး…
ဒီလောက် ဆိုးတဲ့သူ ခံရတဲ့ အချိန်ရောက်လာဦးမှာပါ။
I have heard this message from Gypsi. The best way for people in Sandoway (Thandwe), execute him.
ကျိန်စာဝလေ လှလေဆိုတဲ့လူမျိုးထင်ပါ့ ။